यौन ब्यवसायीसँगको एकदिन | samakalinsahitya.com
- विमल लामिछाने
पत्रकारिता गरेको लामै समय भएपनि शहरीया परिवेश मेरालागि नयाँ थियो । बजारको नियमलाई उल्घंन गर्दै बिहान ५ बजे अघिनै म उठ्ने गर्दथे । एक दिनको कुरा हो, करिब ६ बजेको थियो पत्रकारिताकै माध्यबाट चिनजान भएका साथी इन्द्रको फोन आयो....... । हेलो तयारी रहनुहै हामी ९ बजे एउटा कार्यक्रममा जानु छ । मैले जवाफ दिए मेरो म्यागजिनको लागि एउटा रिर्पोटिङ्ग गर्ने योजना छ, आज मलाई फुर्सद मिल्दैन हओ । रिर्पोटिङ्ग पनि हुन्छ भिजिटिङ्ग पनि हुन्छ जानुपर्छ है । उनले ढेट गरे पछि मैले स्वीकारे चिनजानी भएको धेरै नभएपनि भेटघाट र उठबसको हिसावले हाम्रो मित्रता गाढा भईसकेको थियो ।
मैले प्रश्न गरे– हामी यहाँ किन आईरहेका हौं ? इन्द्रले हास्दै जवाफ दिए नो प्रोब्लोम । माल हान्ने हो क्या आज । मानौँ उनी रेला गरिरहेका छन् । मैले सोचे पसलका केही सामानहरु लानु रहेछ क्यारे...। माल भन्नाले मलाई दोकानका सामान होला भन्ने लाग्थ्यो । इन्द्र फुर्केईलो पाराले आफ्नै शैलिमा फोनमा बोल्न थाले ।’
इन्द्रले उनीहरुलाई हौसलाका साथ स्वागत गरे । हामी भने मुखामुख गर्न थाल्यौ । उनीहरुको यस्तो हल्का प्रस्तुती थियो की मानौँ हामी सधैँ भेटभई रहने निकटका साथि हौँ । हामी बसेको भन्दा ठिक अपोजिट सोफामा उनीहरु बसे । विना संकोच उनीहरुले सबैलाई मामा सम्बोधन गरे र छिटोन भन्दै हतारीरहेका थिए । इन्द्रले हतार–हतार केही खुसुक्क भनुला झैँ गरेर जुरुक उठे र एउटीको कान फुके अनी हामीलाई भने–‘साथी हो ल माल छान्नुहोस् हैँ...। मलाई बल्ल झस्का खुल्यो यसले माल भनेको त यो पो रहेछ ?
धेरै समय सुन्यतामा रयो । म मनमनै सोचिरहेको थिएँ, यीनीहरु कसरी यो पेसामा लागे होलान ? यीनीहरुसँग आन्तरिक कुरा खोतल्न सके न्यूज हुनेथियो की ? या हामीलाई यीनीहरुले नामर्द भन्दाहुन... या ... यस्तै खुल्दुली भइरयो ।
सुन्यतालाई तोड्दै दुवैले एकै स्वरमा सोधे– सर, तपाईहरु......? साथी बोल्न नपाउँदै म अघि सरेर भने– हामी ऊ त्यो खुल्ला चौरीको कुर्शीमा जाऊ न है, उनीहरु मुखामुख गरेर हेरिरहे । न कि उनीहरुलाई लाग्दै थियो होला हामीबाट उनीहरुको रोजीरोटी नचल्ने भो । मेरो स्थान टनौटमा उनीहरुको असहजतालाई चिर्दै भएपनि चौरीतर्फ लाग्यौं । चौरीमा सजाइएका टेवल कुर्शीमा हाम्रो बसाई आम्ने साम्नेको भयो । बसाइको क्रमले चौरीमा पनि हाम्रो बसाई जोडी जोडी नै भयो ।
आज मलाई तपाईले यसरी सोध्दा मेरो बाबाको याद आइरहेछ, सायद म बाबाको साथ भएको भए मेरो यो कर्म हुने थिएन होला । मेरो बाबापनि मलाई सानामा मायाँ गरेर स्कुलबाट फर्केपछि दैनिकी सबै सोध्नुहुन्थ्यो । म खुलेर बाबासँग यसरी नै कुरा गर्थे ...।”
उनी डाको छाडेर रुन थालिन्, भक्कानीएर मेरो छात्तीमा टाउको राखेर रुँदै भनिन्– प्लिज म तपाईलाई बाबा भन्छु है... ।
कमरेडको भाटे कारवाही
साहित्यमा ज्ञानदिलदासको देन
मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा